🥇 ▷ Logitech wuxuu soo bandhigayaa MX Master 3: kuwani waa astaamaheeda ✅
Logitech wuxuu soo bandhigayaa MX Master 3: kuwani waa astaamaheeda
Taxanaha loo yaqaan ‘Loitech MX Master’ ee taxanaha ah waxaa aqoonsan dadweynaha iyo khabiirada labadaba mid ka mid ah safarada wareega ee ugu horumarsan qaybtiisa. Haddaba, qaab dhismeedka IFA 2019, soo-saaraha reer Switzerland wuxuu doonayaa inuu ballaariyo xukunkaas iyadoo la bilaabayo xubin reerka cusub ah: MX Master 3.
Cilmiga cusub ee jiirka, sida Logitech ku sheegay war-saxaafadeedkiisa, waa ku darista dariiqad cusub – oo loo yaqaan MagSpeed ​​- isugeynta isweydaarsiga. Tani, oo ka duwan nidaamyada kale ee caadiga ah, waxay isticmaashaa elektromagnets, oo u oggolaanaysa giraangiraha “inuu sabuubo” oo wareego si saxan oo xoog badan. Sidan, adeegsaduhu wuxuu sameyn karaa dhaqdhaqaaqyo deg deg ah isagoon dadaal xad dhaaf ah sameyn.
Nidaamka cusub ee MagSpeed ​​wuxuu kordhiyaa xawaaraha safarka isaga oo aan u hibeynin furfurnaan ama saxnaan.
Qaabka cusub, sida jiilkii hore, ku daraa batoonno barnaamijyo kala duwan lagu diyaarin karo, marka lagu daro taayar ka mid ah xoqid Safka hore – oo ku yaal dhinaca bidix -. Waxay sidoo kale ku daraysaa 4,000 ‘DPI Darkfiled MX sensor’ oo leh sax ah kaas oo hubiya saxsanaanta weyn ee dhammaan barakacayaasha wuxuuna ka shaqeyn karaa noocyada kala duwan ee dusha sare.
Ilaa hadda sida ay u madaxbannaan tahay, MX Master 3 wuxuu ballan qaadayaa ilaa 70 maalmood oo adeegsiga ah oo hal kicitaan ah. Si kastaba ha noqotee, soo-saaruhu wuxuu tilmaamay in, oo keliya seddex daqiiqo oo kicitaan ah – iyada oo loo marayo isku xirka USB-C uu isku darayo -, duruggu wuxuu awood u leeyahay inuu keeno maalin dhan oo adeegsi ah.
Keydka logitech MX, furaha qumman ee MX Master 3 cusub
Logitech sidoo kale wuxuu soo saaray keyboard cusub oo loo yaqaan MX Keys. Tani, sida MX Master, waxaa lagu xiri karaa seddex qalab oo kala duwan isku mar, waxay leedahay nidaam koronto oo degdeg ah iyadoo la adeegsanayo dekada USB-C waxayna leedahay xoogaa dhameeya lacag bixin. Intaa waxaa u dheer, waxay leedahay nidaam iftiin leh oo ifafaale leh kaasoo ballan qaadaya inuu gaarsiin doono qaddarka saxda ah ee iftiinka iyadoo kuxiran jawiga shaqada.
Labadaba Logitech MX Master 3 iyo MX Keys keyboard ayaa laga heli doonaa Logitech.com iyo Amazon laga bilaabo Sebtember. Labada xaaladoodba, qiimaha tafaariiqda waa 109 euro.